Kengen Me by Andy [Guide]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Reverse Engineering » Kengen Me by Andy [Guide]
1 Kengen Me by Andy [Guide] on 3rd October 2009, 1:58 pm
Andy ဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်ရေးထားတာဘဲ။ ကျနော်လည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကရတာ။
Crack လုပ်ရတာတော့ လွယ်တယ်။
Autoit compiler နဲ့ Compile လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ သူက upx နဲ့ Pack လုပ်ထားပါတယ်။ Autoit Compiler ရဲ့ Default Packer ပါ။
ကျနော် တင်ပေးထားတဲ့ Cracker Guide ကိုဖတ်ပြီးတော့ စမ်းကြည့်ကြပါ။
A simple KeygenMe written in AutoIt3.
You must findavalid username and key.
Published: 11. Sep, 2009
2 Re: Kengen Me by Andy [Guide] on 7th October 2009, 6:40 pm
ကျနော် ရေးထားတဲ့ Keygen လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
3 Re: Kengen Me by Andy [Guide] on 25th October 2009, 11:58 am
ဘယ်လိုဖြေသွားတယ်ဆိုတာကို တင်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဗဟုသုတ ရတာပေါ့။
4 Re: Kengen Me by Andy [Guide] on 26th October 2009, 9:59 am
အခု တစ်လော ifile က ADSL လိုင်းမှာ ကြောင်နေတယ်.. ဒေါင်းလို့ ကို မရဘူး
5 Re: Kengen Me by Andy [Guide] on 2nd November 2009, 3:55 pm
သဘောကတော့ Crackme.au3 ကို Crackme.exe အူဖစ်ေူပာင်းလဲပေးပၝတယ်။
ဒီ့နောက်မြာတော့ UPX 3.03 နဲႛ pack လုပ်ပၝတယ်။
AutoIt နဲႛ ရေးထားတဲ့ ပရိုဂရမ်ကို crack လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်
AutoIt Decompiler .exe to .au3 ကို သုံူးပီး Crackme.au3 script ကို ရယူရပၝမယ်။
ဒီနည်းနဲႛ crack လုပ်တာကတော့ အဆင်ေူပဆုံးပၝပဲ။
တကယ်တော့ AutoIt က Crackme.au3 ကို
Crackme.exe အူဖစ် build လုပ်ပေးလိုက်ခဵိန်မြာ
compile လုပ်ထားတဲ့ Crackme.a3x ကို Crackme.exe မြာ overlay (တခၝတည်းတြဲပေးလိုက်ပၝတယ်)
Olly ကိုအသုံူးပြူပီး Crackme.exe ဖိုင်ကို unpack လုပ်ခဵိန်မြာ
Olly က Overlay လုပ်ထားတဲ့ Crackme.a3x ကို dump လုပ်ပေိးိုံင်ူခင်းမရြိပၝဘူး။
ဒၝေုကာင့် dump(unpack) လုပ်ထားတဲ့
Crackme.exe ရဲႛဖိုင်အဆုံးမြာ overlay ဖိုင်ကို ကူးထည့်ပေးရပၝမယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖိုႛရာအတကြ် Hex editor တစ်ခုခုကို အသုံူးပရြမြာူဖစ်ပၝတယ်။
Overlay ဖိုင်ကို မကူးထည့်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ "Unable to open the script
file" ဆိုတဲ့ error box တက်လာမြာူဖစ်ပၝတယ်။
Crackme.exe ဖိုင်ကို crack လုပ်ဖိုႛ
Olly နဲႛ ဖငြ့်တဲ့အခၝမြာ
ကဋ္ဋန်တော်တိုႛတြဲပေးလိုက်တဲ့ overlay ဖိုင် ပၝလာမြာ
မဟုတ်ပၝဘူး။ (ဆိုလိုတာက overlay ဖိုင်ကို
RAM ပေၞ မကူးတင်ပၝဘူး)။
ဒၝေုကာင့် Crackme.exe က Crackme.a3x
(Overlay ဖိုင်) ကိုဖတ်ိုံင်ဖိုႛ CreateFile (ရြိူပီးသားဖိုင်ကိုဖတ်ရန်
ဖငြ့်ူခင်း)၊ ReadFile (စာလုံးမဵားကိုဖတ်ူခင်း) API တေကြို အသုံူးပပြၝတယ်။
ပေၞစေတဲ့ dialog ကိုတော့
CreateWindowExW API ကို အသုံူးပပြၝတယ်။ (W ဆိုတာကတော့ ယူနီကုဒ်စာလုံးကို
Edit text box ထဲရိုက်ထည့်တဲ့ စာလုံးတြေ (User name နဲႛ
key) အတကြ် GetWindowTextW API ကို အသုံူးပတြာူဖစ်ပၝတယ်။ ဒၝေုကာင့်
serial ကိုရြာမယ်ဆိုရင် GetWindowTextW API မြာ breakpoint သတ်မတြ်ူပီး ရြာတာ အူမန်ဆုံူးဖစ်ပၝလိမ့်မယ်။
အုကူံပလြိုတာကတော့ သင့်မြာ AutoIt
Decompiler .exe to .au3 မရြိခဲ့ဘူးဆိုရင် AutoIT နဲႛ
compile လုပ်ထားတဲ့ script တေကြိုကံခြဲ့မယ်ဆိုရင် serial ရြာမယ့်အစား crack လုပ်တာက
0040FDB6 CALL DWORD PTR
0040FDBC TEST EAX,EAX
0040FDBE JE CrackMe_.0042A56E
0040FDC4 POP EDI
0040FDC5 ADD EAX,-2
ဒီဥပမာကိုကည့်လိုက်ရင် ပထမဆုံး EAX တန်ဖိုး
သုညူဖစ်မူဖစ်စစ်ပၝတယ်။ သုညူဖစ်ရင် error တက်တာူဖစ်တဲ့အတကြ်
JE ကို စဉ်းစားစရာမလိုပၝဘူး။ ADD EAX, -2 ဟာ စိတ်ဝင်စားဖိုႛ
ကောင်းပၝတယ်။ မတ်ြထားရမြာက API function တေဟြာ
value ကို EAX မြာ သိမ်းဆည်းပၝတယ်။ ဒၝေုကာင့်
ADD EAX, -2 အစား MOV AL,0 ဆိုရင် ကဋ္ဋန်တော်တိုႛရဲႛ
ပရိုဂရမ်ဟာ registerူဖစ်ပၝူပီ။ ဘာေုကာင့်လဲဆိုတော့ stringိံစ်ြခုဟာ
တန်ဖိုးညီခဲ့ရင် CompareStringW က return တန်ဖိုးအူဖစ်2ကို EAX ထဲမြာ သိမ်းဆည်းမြာမိုႛလိုႛပၝ။
(ဒၝကလဲ သင်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ user
name နဲႛ key ရဲႛ
length တူညီမသြာူဖစ်ပၝတယ်။ မတူညီခဲ့ရင်တော့
CompareStringW API ဆီရောက်လာမြာ မဟုတ်ပၝဘူး။)
ALPHA WIN unicode font နဲ့ ပြန်ပြင်ဖတ်ပါ။
6 Re: Kengen Me by Andy [Guide] on 3rd November 2009, 3:18 pm
အော် အစ်ကိုက ရေးပြီးသွားပြီလား။
ကျနော်လည်း ဒီနေ့အားတာနဲ့ ရေးလာခဲ့ပါတယ်။
နည်းနည်းလောက် ဖတ်ပေးပေါ့။ မှားခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ။
Cracker: $ƴǩǾ [http://syko92.wordpress.com]
CrackMe ကို ခရက်လုပ်သွားပုံ အဆင့်ဆင့်အား ကျနော့်ဆရာ ကို rhythm က ရေးပေးပါဆိုလို့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ (တကယ်ဆို ကို rhythm က ကျနော်တို့ကို ရေးပေးရမှာ။ ကျနော်က ခရက်သာလုပ်တတ်တာ ၊ ပြန်မရှင်းတတ်ဘူး။ အခုတော့ ဆရာက ရေးခိုင်းတော့လည်း တပည့်လေးက လုပ်ပေးရတာပေါ့။ )
တစ်ခုတော့ ကြိုပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော် Crack လုပ်ရင် အမြဲ ကမောက်ကမပါ။ တစ်ခါမှ နည်းမှန်လမ်းမှန် မရဖူးဘူး။ (တစ်ခါတစ်လေဆို အဆင့်တွေ ဟိုကျော်ဒီကျော်နဲ့လည်း ခရက်လို့ရသွားတတ်တယ်)
အဲဒါကြောင့် အခုကျနော် ရေးပြတဲ့အခါ လိုအပ်ချက်တွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခု ကျနော် ခရက်လုပ်ရတဲ့ကောင်က AutoIT Script နဲ့ ရေးထားတော့ တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတော့ စလုပ်တုန်းကဆို သူ့ Code တွေနဲ့တင် တော်တော်တိုင်ပတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ အခုလည်း ပြန်ရေးပြလိုက်ပါဆိုလို့သာ ပြန်ရေးပြရတာ။ ရေးနေရင်းနဲ့ Coding ကို ပြန်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် မူးသွားတာ ဘယ်နှခါရှိမှန်းမသိဘူး။
လိုအပ်တာတွေရှိရင်လည်း ပြောပါခင်ဗျာ။ ကျနော်ကတော့ keygen ကို (--ကျနော် မကြိုက်ပေမယ့်လည်း ခုထိ သုံးနေရတဲ့--)VB.NET နဲ့ဘဲရေးထားတာပါ။
ပြီးတော့ အခြားသူများ လေ့လာလို့ရအောင်လည်း keygen အတွက် AutoIT နဲ့ ပြန်ရေးထားတဲ့ Code ကို ပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ့ Code ကို ရေးသားသူကတော့ deurus ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော် အခု CrackMe ကို Crack လုပ်တုန်းက သူ့ရဲ့ အကူအညီတွေ အများကြီးပါပါတယ်။ AutoIt နဲ့ ရေးထားတဲ့ ဟာတွေကို သူရှင်းပြပေးတာပါ။
သူရှင်းတုန်းကတော့ နားလည်တယ်။ ခုတော့ ရတော့ဘူး။
***ထပ်ပြောမယ်နော်။ ကျနော်ရှင်းတာမှာ လိုအပ်တာတွေ မှားနေတာတွေရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဘီဂင်နာလေးမို့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ လိုအပ်တာရှိရင် ဖြည့်သွားလိုက်ပါ။***
အခု Program ကို စပြီးတော့ Crack လုပ်ပါမယ်။
လိုအပ်တဲ့ Tools တွေကတော့ : myExe2Aut နဲ့ AutoIt3 Decompiler [http://www.nerdbucket.com/mirrors/myAutToExe2_2_AutoIt3_Decompiler_opensource.zip] တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Program ကို PEiD နဲ့ ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ UPX နဲ့ Pack လုပ်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။ UNPACK လုပ်လိုက်ပါ။ (Unpack လုပ်နည်းကို ကို rhythm ရေးထားတဲ့ Cracker Guide 2.0 မှာ ဖတ်နှိုင်ပါတယ်။)
AutoIT နဲ့ ရေးထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ အပေါ်မှာ ကျနော်ဖော်ပြပြီးပါပြီ။
အဲဒီ့အတွက် ကျနော်တို့အနေနဲ့ AutoIT script တွေကို အနည်းငယ် လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ (ကျနော့်တုန်းကလည်း နည်းနည်းတော့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အခုတော့ မေ့တေ့တေ့ )
အဲဒီ့အတွက် သူ့အကြောင်းကျနော်တို့ google မှာ ရှာပြီးတော့ အနည်းငယ်တော့ လေ့လာရပါမယ်။
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်တဲ့ myExe2Aut ဆိုတဲ့ Tool ကိုရှာလိုက်ပါ။
အဲဒါတွေရှာပြီးပြီ ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း AutoIT Language နဲ့ အနည်းငယ် ရင်းနှီးပြီဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ စတင်ပြီး ခရက်လုပ်ပါတော့မယ်။
အောက်မှာကတော့ serial ကို စစ်ပေးတဲ့ Function ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးကို တွေ့အောင်ရှာပါ။
တွေ့ရင်တော့ အောက်မှာ ကျနော်ပြောတဲ့အတိုင်း လေ့လာရင်လေ့လာပါ။ မဟုတ်ရင်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်ရင်တောင် Programming အခြေခံရှိတာနဲ့တင် နားလည်မှာပါ။
If $USER_LEN < $PASS_LEN Then <= UserName က Password ထက် နည်းနေရင် Error တက်ပါမယ်။
ElseIf $USER_LEN <4Then <= UserName နေရာမှာ char ၄ လုံးမရှိရင် Error တက်ပါမယ်။
$SIG &= Chr(BitXOR(Asc(StringMid($USER, $INDEX, 1)), Asc(StringMid($OPKEY, $USER_LEN - $INDEX + 1, 1)))) <- ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အောက်မှာ ရှင်းထားပါတယ်။
အောက်ကတော့ Program တစ်ခုလုံးရဲ့ အရေးကြီးဆုံးလိုင်းပါ
Program ရဲ့ routine ကို သေချာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ဥပမာ -user name: $ƴǩǾ
$PASS_INT ကို တွက်ကြည့်ပါမယ်။
UserName ရဲ့ Length က ၄ ၊ Password ရဲ့ Length က လည်း ၄ ဆိုတော့ စားလိုက်တော့ စားလဒ်=၁ ရပါတယ်။
$PASS_INT = Int($USER_LEN / $PASS_LEN) = 4/4 = 1
$PASS_MOD ကို တွက်ပါမယ်။
UserName ရဲ့ Length က ၄ ၊ Pass ရဲ့ Length က လည်း ၄ ဆိုတော့ အကြွင်းရှာတော့0ရပါတယ်။
$PASS_MOD = Mod($USER_LEN, $PASS_LEN) =4mod4= 0
$OPKEY = _STRINGREPEAT($PASS, $PASS_INT) & StringLeft($PASS, $PASS_MOD) = okys & "" = okys
တွက်စရာရှိတာ တွက်ပြီးပြီဆိုတော့ နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့
အပေါ်က $SIG &= Chr(BitXOR(Asc(StringMid($USER, $INDEX, 1)), Asc(StringMid($OPKEY, $USER_LEN - $INDEX + 1, 1)))) ဆီကိုပြန်သွားပါမယ်။
ရှင်းနေရင် ပိုရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ ရှင်းတော့ဘူးနော်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့။ (အစကတော့ ရေးကြည့်သေးတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဖတ်တာတောင် နည်းနည်း မူးလာလို့ ပြန်ဖျက်လိုက်တာ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လေ့လာကြည့်လိုက်တော့။ အဲဒီ့လိုင်းကို လွယ်တာတော့ လွယ်တယ်။)
ှ83 XOR 32 = 115 = s
89 XOR 32 = 121 = y
75 XOR 32 = 107 = k
79 XOR 32 = 111 = o
ကဲ ဒါဆို အဖြေရသွားပြီပေါ့နော်။ အဖြေဘာလဲ ဆိုတာကို Program Routine ကိုကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်တွက်သွားတဲ့နည်းပါ။
အခု Keygen စရေးမယ်နော်။
နားလည်လားမလည်လားတော့ သိဘူး။ ကျနော့်ဟာကျနော်တော့ နားလည်တယ်။ ပြန်သာမရှင်းတတ်လို့။ ကဲ အခု ကျနော်ရေးထားတဲ့ keygen ကို ပြပါမယ်။
Keygen ရဲ့ Code တွေကိုတော့ ရှင်းပြဖို့မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ရေးထားတဲ့ ဘီဂင်နာ Code လေးတွေပါ။ ကြည့်တာနဲ့တင် နားလည်ကြမှာပါ။
Public Class CrackME2
Private Sub CrackMe2_Load(ByVal sender As System.Object, ByValeAs System.EventArgs) Handles MyBase.Load
MsgBox("This isaKeygen...", MsgBoxStyle.Information, "MYANMAR ᴚᴲVᴲЯ₴!Иᵷ SCHOOL")
'''''Register Button ပိုင်းကို မူရင်း Code နီးပါးရအောင်လို့ ပြန်ရေးထားတာပါ။''''''
Public Sub btnreg_Click(ByVal sender As System.Object, ByValeAs System.EventArgs) Handles btnreg.Click
Public Function checkpass(ByVal user As String, ByVal pass As String) As String
If user.Length < pass.Length Then
MsgBox("Invalid username or key.", MsgBoxStyle.Critical, "ERROR")
ElseIf user.Length <4Then
For i As Integer = 1 To user.Length
SIG = Asc(Mid(txtuser.Text, i, 1))
SIG = SIG Xor 32
KEY = Chr(SIG) & KEY
If txtpass.Text = KEY Then
MsgBox("Thanks!! Your Key is now Registered.", , "Registered.")
MsgBox("Invalid UserName And Password. Try Again.", , "Invalid")
''''''''''Keygen ထုတ်တဲ့ အပိုင်းရောက်ပါပြီ'''''''''''''
Private Sub btngenerate_Click(ByVal sender As System.Object, ByValeAs System.EventArgs) Handles btnrule.Click
Dim yna As String
If Len(txtuser.Text) <4Then
txtpass.Text = "min4chars"
For i As Integer = 1 To Len(txtuser.Text)
yna = Asc(Mid(txtuser.Text, i, 1))
yna = yna Xor 32
txtpass.Text = KEY
အောက်ကတော့ keygen ကို AutoIt နဲ့ ဘဲ ပြန်ရေးထားတဲ့ဟာပါ။ (ရေးသားသူကတော့ deurus ဖြစ်ပါတယ်။ သူရေးထားတဲ့ VB.NET keygen တောင်ရှိသေးတယ်။ ကုဒ်က ဘာမှမကွာလို့ တင်ပေးတော့ဘူးနော်)
$MAIN = GUICreate("keygen by deurus", 300, 80, -1, -1, 382205952, 385)
$GIVE_UP = GUICtrlCreateButton("Generate", 70, 55, 60, 20) <- Give Up ဆိုတဲ့ Button နေရာမှာ Generate button ကို အစားထိုးထားပါတယ်။
Call("GETKEY", GUICtrlRead($NAME_INP), GUICtrlRead($PASS_INP)) <- getkey function ကို Give_UP ဆိုတဲ့ button ထဲမှာ ထည့်လိုက်ပါတယ်။
Func GETKEY($USER, $PASS) <- ဒါကတော့ keygen function ဖြစ်တဲ့ GETKEY ပါ။
GUICtrlSetData($PASS_INP ,"min4chars");
Func CHECKKEY($USER, $PASS) <- ဒါကတော့ Original Code ပါ
ကို rhythm လည်း ကျနော်လိုတာရှိရင် ဖြည့်ပေးပါဦးနော်။ အားကိုးပါတယ်။ အစ်ကိုသာ ကျနော့်ကို အနီးကပ်သင်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။ အခုတော့ ဟိုပုန်းဒီပုန်းနဲ့ ဘယ်လိုက်ရမှန်းသိဘူး။
ကိုယ့်ဟာကိုယ်လေ့လာတာ ထင်သလောက် ခရီးမရောက်သေးဘူး။ နောက်တစ်ခါ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် အကြောင်းကြားလိုက်နော်။ အိမ်လာပြီး သင်မယ်။ ဒီတစ်ခါ တစ်နေကုန်နေမှာ။
ps# deurus ၏ AutoIt နှင့်ရေးထားသော keygen code တွေကနေ ပြီးတော့မှ ပြန်လည်ရှင်းပြပေးထားတာပါ။ Crack တုန်းကတော့ crack လို့ရပြီး မရှင်းပြတတ်လို့ ကိုးကားရှင်းပြထားပါတယ်။ နားမလည်တာရှိရင် swanhtet1992[at]gmail[dot]com မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြန်ဖြေပေးပါ့မယ်။
လောလောဆယ်တော့ နိုဝင်ဘာ တစ်လ Online နားထားပါတယ်။ (ကျန်းမာရေးကြောင့်ရယ် ၊ စာဖတ်ချင်လို့ရယ် ၊ Software Protection ဆိုတာကို အလေးမထားတဲ့ Myanmar Game Studio တစ်ခုက ထွက်သမျှ Game တွေကို crack လုပ်ဖို့အတွက်ရယ်ကြောင့်ပါ။ )
အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ
7 Re: Kengen Me by Andy [Guide] on 5th November 2009, 3:50 pm
ထင်တော့ထင်သား။ autoIT script (*.au3) ကနေပဲ ခြေရာခံတာဖြစ်မယ်လို့။
သူကတော့ script ဆိုတော့ ပိုလွယ်တယ်လေ။ Olly နဲ့ဆိုရင် နည်းနည်းလေး လက်ဝင်မယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
8 Re: Kengen Me by Andy [Guide] on 5th November 2009, 4:53 pm
rhythm wrote: ထင်တော့ထင်သား။ autoIT script (*.au3) ကနေပဲ ခြေရာခံတာဖြစ်မယ်လို့။
ကျနော် Olly နဲ့ စလုပ်ကြည့်သေးတယ်။
၄ နာရီလောက်ကြာသွားတယ်။ ခေါင်းတွေကိုမူးလို့။ အဲဒါနဲ့ လက်လျော့လိုက်တာ။
ပြီးတော့မှ Script ကို ဖတ်ပြီးလုပ်လိုက်တာလေ။ ဟီး
9 Re: Kengen Me by Andy [Guide] on 14th November 2009, 11:40 am
AutoIt ရဲ့ သဘောကတော့ Crackme.au3 ကို Crackme.exe အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ ဒီ့နောက်မှာတော့ UPX 3.03 နဲ့ pack လုပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် AutoIt နဲ့ ရေးထားတဲ့ ပရိုဂရမ်ကို crack လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် AutoIt Decompiler .exe to .au3 ကို သုံးပြီး Crackme.au3 script ကို ရယူရပါမယ်။ ဒီနည်းနဲ့ crack လုပ်တာကတော့ အဆင်ပြေဆုံးပါပဲ။
တကယ်တော့ AutoIt က Crackme.au3 ကို Crackme.exe အဖြစ် build လုပ်ပေးလိုက်ချိန်မှာ compile လုပ်ထားတဲ့ Crackme.a3x ကို Crackme.exe မှာ overlay (တခါတည်းတွဲပေးလိုက်ပါတယ်)
လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Olly ကိုအသုံးပြုပြီး Crackme.exe ဖိုင်ကို unpack လုပ်ချိန်မှာ Olly က Overlay လုပ်ထားတဲ့ Crackme.a3x ကို dump လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် dump(unpack) လုပ်ထားတဲ့ Crackme.exe ရဲ့ဖိုင်အဆုံးမှာ overlay ဖိုင်ကို ကူးထည့်ပေးရပါမယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရာအတွက် Hex editor တစ်ခုခုကို အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Overlay ဖိုင်ကို မကူးထည့်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ "Unable to open the script file" ဆိုတဲ့ error box တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Unpack လုပ်ပြီး overlay ဖိုင်တွဲထားတဲ့ Crackme.exe ဖိုင်ကို crack လုပ်ဖို့၊ serial ရှာဖို့ Olly နဲ့ ဖွင့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့တွဲပေးလိုက်တဲ့ overlay ဖိုင် ပါလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (ဆိုလိုတာက
overlay ဖိုင်ကို RAM ပေါ် မကူးတင်ပါဘူး)။ ဒါကြောင့် Crackme.exe က Crackme.a3x (Overlay ဖိုင်) ကိုဖတ်နိုင်ဖို့ CreateFile (ရှိပြီးသားဖိုင်ကိုဖတ်ရန် ဖတ်ခြင်း)၊ ReadFile (စာလုံးများကိုဖတ်ခြင်း)
API တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ RAM ပေါ်က Crackme.exe က disk ပေါ်က CrackMe.exe ရဲ့ overlay ဖိုင်ကို ဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်။
Register လုပ်ဖို့ ပေါ်စေတဲ့ dialog ကိုတော့ CreateWindowExW API ကို အသုံးပြုပါတယ်။ (W ဆိုတာကတော့ ယူနီကုဒ်စာလုံးကို အသုံးပြုမယ်လို့ ပြောတာပါ။) Edit text box ထဲရိုက်ထည့်တဲ့
စာလုံးတွေ (User name နဲ့ key) အတွက် GetWindowTextW API ကို အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ဒီပရိုဂရမ်ရဲ့ serial ကိုရှာမယ်ဆိုရင် GetWindowTextW API မှာ breakpoint သတ်မှတ်ပြီး ရှာတာ အမြန်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက GetWindowTextW API ကနေ သင် breakpoint ဖမ်းထားတဲ့ နောက်နေရာတစ်ခုဆီ Trace over (Ctrl+F12) လုပ်ခိုင်းတာပါ။
ပြီးရင် View menu က Run trace ကိုရွေးပြီးကြည့်ရင် ပရိုဂရမ်အလုပ်လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပြုလိုတာကတော့ သင့်မှာ AutoIt Decompiler .exe to .au3 (သို့) myAutToExe 2.07 မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် AutoIT နဲ့ compile လုပ်ထားတဲ့ script တွေကို ကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင် serial ရှာမယ့်အစား
crack လုပ်တာက ပိုမြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
0040FDB6 CALL DWORD PTR DS:[<&KERNEL32.CompareStringW>]
ဒီဥပမာကိုကြည့်လိုက်ရင် ပထမဆုံး EAX တန်ဖိုး သုညဖြစ်မဖြစ်စစ်ပါတယ်။ သုညဖြစ်ရင် error တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် JE ကို စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး။ ADD EAX, -2 ဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့
ကောင်းပါတယ်။ မှတ်ထားရမှာက API function တွေဟာ သူတို့ရဲ့ return value ကို EAX မှာ သိမ်းဆည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ADD EAX, -2 အစား MOV AL,0 ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ပရိုဂရမ်ဟာ register ဖြစ်ပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ string နှစ်ခုဟာ တန်ဖိုးညီခဲ့ရင် CompareStringW က return တန်ဖိုးအဖြစ်2ကို EAX ထဲမှာ သိမ်းဆည်းမှာမို့လို့ပါ။
(ဒါကလဲ သင်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ user name နဲ့ key ရဲ့ length တူညီမှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီခဲ့ရင်တော့ CompareStringW API ဆီရောက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။)
- rhythm (Myanmar Cracking Team)
Last edited by rhythm on 14th November 2009, 11:54 am; edited2times in total
10 Re: Kengen Me by Andy [Guide] on 14th November 2009, 11:44 am
... // အရေးမကြီး။
FUNC _STRINGREPEAT($SSTRING,$IREPEATCOUNT) // User-defined Function
FOR $ICOUNT=1 TO $IREPEATCOUNT
$MAIN=GUICREATE("Register",300,80,-1,-1,382205952,385) // Window တစ်ခုကို ဖန်တီးသည်။
GUISETSTATE(@SW_SHOW,$MAIN) // Window ကိုပြသသည်။
CASE $REGISTER // Register button ကိုနှိပ်ခဲ့လျှင် ....
// Name နေရာတွင် "rhythm" ဟုရိုက်ပါ။ Key နေရာတွင် "ABCDEF" ဟုရိုက်ထည့်ကြည့်ပါမည်။
MSGBOX(0,"Info","Findavalid username and key to register.")
LOCAL $OPKEY="",$SIG="" // Local Variable အဖြစ်ကြေညာ
LOCAL $USER_LEN=STRINGLEN($USER) // user name နေရာတွင် "rhythm" လို့ရိုက်ထည့်ခဲ့တာကြောင့်6ဖြစ်ပါမယ်။
LOCAL $PASS_LEN=STRINGLEN($PASS) // key နေရာတွင် "ABCDEF" လို့ရိုက်ထည့်ခဲ့တာကြောင့်6ဖြစ်ပါမယ်။
IF $USER_LEN<$PASS_LEN THEN // Statement False
MSGBOX(0,"ERROR","Invalid username or key.")
ELSEIF $USER_LEN<4 THEN // Statement False
// User name ၏ length ကို password ၏ length ဖြင့်စားသောရလဒ်ကို integer အဖြစ်ပြောင်း။
ဒါကြောင့် 6/6 = 1
// User name ၏ length ကို password ၏ length ဖြင့်စားပြီး အကြွင်းရှာသည်။
ဒါကြောင့် 6/6 = 0
$OPKEY=_STRINGREPEAT($PASS,$PASS_INT) & STRINGLEFT($PASS,$PASS_MOD)
// StringLeft (string, စာလုံးအရေအတွက်) = String ၏ ဘယ်ဘက်မှစပြီး သတ်မှတ်ထားသော အရေအတွက်ကို ဖတ်သည်/ သိမ်းဆည်းသည်။
ဒါကြောင့် StringLeft ("ABCDEF", 0) ဖြစ်သောကြောင့် StringLeft function က ဘာစာလုံးမှ ဖတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
StringLeft ("ABCDEF",1) = "ABCDEF" ဖြစ်ပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ $SRESULT = "ABCDEF" ဖြစ်လို့ပါ။
"ABCDEF" နဲ့ "" ကို ပေါင်းတဲ့အခါ (& ကိုတွေ့လို့ AND operation လုပ်တယ် မထင်ပါနဲ့။ string နှစ်ခုကို concatenate လုပ်ဖို့ သုံးတာပါ။) "abcdef" ပဲရပါတယ်။
FOR $INDEX=1 TO $USER_LEN // for(index = 1; index <= USER_LEN; index++) နှင့်တူသည်။
// StringMid (string, string ၏အစ, စာလုံးအရေအတွက်) = သတ်မှတ်ထားသောနေရာမှစပြီး သတ်မှတ်ထားသော စာလုံးအရေအတွက်ကို သိမ်းဆည်းသည်။ ထို့နောက် ASCII အဖြစ်ပြောင်းသည်။
Sig = Sig + (StringMid("rhythm",1,1) ^ (StringMid("ABCDEF",6,1)
Sig = "" + ("r" ^ "F")
Sig = "" + (114 ^ 70)
Sig = "" + 52 = "4"
for loop ကို ပထမဆုံး အကြိမ် ပတ်ပြီးချိန်မှာ "4" ရရှိပါတယ်။
for loop ကို ဒုတိယ အကြိမ် ပတ်ပြီးချိန်မှာ "4-" ရရှိပါတယ်။ ( "h" နဲ့ "E" ကို XOR လုပ်)
တတိယအကြိမ်မှာ "4-=" ရပါတယ်။ ( "y" နဲ့ "D" ကို XOR လုပ်)
၄ကြိမ်မြောက်မှာ "4-=7" ရပါတယ်။ ( "t" နဲ့ "C" ကို XOR လုပ်)
၅ကြိမ်မြောက်မှာ "4-=7*" ရပါတယ်။
၆ကြိမ်မြောက်မှာ "4-=7*," ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် $SIG & =CHR(BITXOR(ASC(STRINGMID($USER,$INDEX,1)), ASC(STRINGMID($OPKEY,$USER_LEN-$INDEX+1,1)))) ကိုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ
နောက်ဆုံးရလာတဲ့ $SIG တန်ဖိုးဟာ 4-=7*, ဖြစ်ပါတယ်။ $SIG = $SIG + XOR_Result ကြောင့် ဒီအဖြေရတာဖြစ်ပါတယ်။ + =
NEXT // index ++; နဲ့တူပါတယ်။
// 32 ဟာ space နဲ့ညီတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ တွက်ထုတ်လိုက်တဲ့ SIG တန်ဖိုးဟာ " " (space ၆ နေရာစာ)နဲ့ ညီကိုညီရပါမယ်။
MSGBOX(0,"INFO","Your key was registered.")
MSGBOX(0,"INFO","Your key is invalid.")
// ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မှတ်ချက်ချရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ user name နဲ့ key တန်ဖိုးတို့ကို XOR လုပ်တဲ့အခါမှာ space ၆နေရာနဲ့ ညီဖို့လိုပါတယ်။
user name = "rhythm"
key = "MHTYHR"
user name က "r" နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ key ကိုအရင်ရှာကြည့်ပါမယ်။
"r" ^ " " = 114d ^ 32d = 82d = "R"
"h" ^ " " = 104d ^ 32d = 72d = "H"
"y" ^ " " = 121d ^ 32d = 89d = "Y"
"t" ^ " " = 116d ^ 32d = 84d = "T"
"m" ^ " " = 109d ^ 32d = 77d = "M"
ပြောင်းလို့ရတဲ့ စာလုံး "RHYTHM" တွေကို "ABCDEF" နေရာမှာ အစားထိုးပါမယ်။
"r" နဲ့ "F" ကို XOR လုပ်ခဲ့တာ အမှတ်ရပါ။ အဲဒီတုန်းက "4" ရခဲ့ပါတယ်။ "4" အစား " " (space) ကိုရဖို့အတွက် "R" နဲ့ XOR လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် "F" နေရာမှာ "R" နဲ့ အစားထိုးရပါမယ်။
ဒီလိုနဲ့ "E" နေရာမှာ "H"၊ "D" နေရာမှာ "Y"၊ "C" နေရာမှာ "T"၊ "B" နေရာမှာ "H"၊ "A" နေရာမှာ "M" အစားထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့
key နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ရိုက်ထည့်ရမှာက "ABCDEF" အစား "MHTYHR" ဖြစ်လာပါတယ်။
Keygen ရေးတာကတော့ သင် ဥာဏ်ရှိရင် ရှိသလို ရေးလို့ရပါတယ်။
$ƴǩǾ ရဲ့ရှင်းလင်းချက်မှာ ထောက်ပြစရာ (၂)ချက်ရှိပါတယ်။
(၁) ဘာအတွက်ကြောင့် UPX ကို unpack လုပ်ခိုင်းသလဲတော့ မသိဘူး။ myExe2Aut ရှိထားရင် *.au3 ဖိုင်ကိုရဖို့ UPX ကို unpack လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။
(၂) နောက်တစ်ခုမရှင်းတာက $OPKEY တွက်ပုံပါ။ _STRINGREPEAT က string ကို ပြောင်းပြန်လှည့်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ အကြီးအသေး ပြောင်းပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။
11 Re: Kengen Me by Andy [Guide] on 19th November 2009, 5:32 pm
ရှင်းသွားတာ တကယ့်ကို ကောင်းတယ်ဗျို့။
ပညာယူသွားပါတယ်။ ခုလိုရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော့်ရဲ့ မတော်မတတ်မှုကို ဖြည့်ပြောပေးသွားတာလည်း ရှဲရှဲနီ။
သူရေးထားတဲ့ Code နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်သိပ်နားမလည်ထားတဲ့အတွက် OPKEY ကို ကျနော်မတွက်ပြထားပါဘူး။
အဲဒီ့လိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အဲဒါကြောင့်မို့ ကျနော်ရှင်းကိုရှင်းမထားတာလေ။ ဟီးဟီး
ရလာမယ့် Result တော့ထုတ်ပြထားတယ်။
STRINGREPEAT က string ကို ပြောင်းပြန်မလှည့်ပေးတာ ဟုတ်ပါတယ်။ သူက String ရှိသလောက်ကို ဖြတ်ပြီးတော့ တစ်ခုချင်းစီကို Loop ပတ်တဲ့ သဘောလို့ ထင်ပါတယ်။ (ကျနော့်အထင် သက်သက် )
StringLeft ဆိုတာနဲ့ကမှ တွဲပြီးတော့ စာကို ပြောင်းပြန်လှည့်ပေးတာလို့ကျနော်ထင်ပါတယ်။
မှားတာရှိရင်ဖြည့်ပေးပါဦး။ ကိုယ်မကျွမ်းတဲ့ ဘာသာကို ခရက်ရတာ တော်တော်လက်ပေါက်ကပ်တယ်ဗျာ။
12 Re: Kengen Me by Andy [Guide]